विराटनगरमा मध्यरातमा महिलाको घरमा झ्यालबाट छिरेका यी यु’वाले के गरे यस्तो ? – Khabarhouse
विराटनगरमा मध्यरातमा महिलाको घरमा झ्यालबाट छिरेका यी यु’वाले के गरे यस्तो ?
Khabar house | २० श्रावण २०७८, बुधबार १५:५६ | Comments
विराटनगर : एक्लै महिला भएको घरमा राति जाने एक पु’रुष प’क्रा उ गरेका छन् । उनी महिलाको घरमा झ्यालबाट पसेका थिए। त्यहाँ उनले महिला माथि नराम्रो नि’यत राखेर गएको बताइन्छ। तर उनलाई प्रहरीले प’क्रा उ गर्न सफल भएको छ । यो घटना बिराटनगरको हो ।
मध्यरातमा महिलाको घरमा गएर महिला माथि त्यस्तो गरेको आ’रोपमा विराटनगरबाट ती युवा प’क्रा उ परेका हुुन्। प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका–६ का २८ वर्षीय गणेश महतोलाई प’क्रा उ गरेको हो । मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठका अनु सार महतोले मध्य राति अर्काको घरमा पसेर म’हिला माथि त्यस्तो गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
ती युवाले यस्तो गरेको सूचनाका आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगरबाट खटिएको टोलीले सोमबार राति उनलाई प’क्रा उ गरेको हो । पक्राउ परेका महतो माथि कारबाही अघि बढाउन आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जानकारी डीएसपी श्रेष्ठले दिए ।पछिल्लो समय महिलामाथि यस्ता घ’टना दिन दिनै भै रहेको समाचार आएका छन् । देशभरी यस्तो घटना बढ्नाले चि’न्ता थपिएको छ । प्रतिकात्मक तस्वीर